Ninkii isku qarxiyey hotel SYL ee Muqdisho oo ka yimid dal ka mid ah Yurub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ninkii isku qarxiyey hotel SYL ee Muqdisho oo ka yimid dal ka mid ah Yurub
Mareeg.com: Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ninkii khamiistii tagtay isku qarxiyay Hotelka SYLee magaalada Muqdisho uu ahaa Soomaali ka yimid dalka Swizerland ee qaraadda Yurub, islamarkaana lagu magacaabi jiray Maxamuud Cismaan Jimcaale “Dhageey”
Warku waxa uu intaa ku darayaa in Dhagey uu horay uga tirsanaa jiray Maxkamadihii islaamiga ah, kadib uu tahriib ku galay yurub gaar ahaana Swizerland dhawaana uu kusoo laabtay Muqdisho isagoo ka mid ahaa Al-Shabaab.
Qaar kamid ah Qaraabada ninka isqarxiyay ayaa KNN u xaqiijiyay in hooyada dhashay ninkaas ay ku indho beeshay Madaafiic lagu garaacay Suuqa Bakaaraha Sanado kahor, waxaana loo filayaa in arrintaas ka mid tahay waxyaabaha uu carada ka qaaday.
Sidoo kale, Maxamuud Cismaan Jimcaale “Dhageey” oo da’adiisa lagu qiyaasay dhowr iyo sodon jir ayaa bilo ka hor jeexjeexay baasaboorkiisa Swizerland xilli ay waalidiintiisa uga digayeen inuu sidaa sameeyo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ninkaasi isku qarxiyay Hotelka SYL uu xarun Saacadaha lagu iibiyo ku lahaan jiray Xaafda Baarubax gaar ahaana Agagaarka Masjidka Xareed ka hor inta uusan ku biirin Al-shabaab.
Yaa Somaliland ku eedeysay raasaastii habeen hore lagu riday saldhiga booliska Boorame?
Daawo heshiisyo ay kala saxiixdeen dalalka Turkiga iyo Jabuuti